ဝက်သားစားခြင်းကြောင့် ဝက်တုပ်ကွေး (H1N1) ရောဂါ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး – XB Media Myanmar
H1N1 (ဝက်တုပ်ကွေး) ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ကာကွယ်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
တုပ်ကွေးများ အဖြစ်များနေသောသောကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားပါတယ်။ H1N1 Flu လဲ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
ဝက်တုပ်ကွေး ဘယ်လို ကူးစက်သလဲ။ ။H1N1 တုပ်ကွေးဟာ ဝက်တွေမှာသာ ကူးစက်တတ်တဲ့ တုပ်ကွေးvirus မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဖိုက်နဲ့ မတူတာက သန်းတွေ၊ မှက်တွေကနေ ကူးစက်တာမဟုတ်ပဲ လူကနေ လူကိုသာ ကူးပြီး တိရိစ္ဆာန်ကနေလည်း လူကို မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။H1N1 တုပ်ကွေးက အလွန်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးဟာ တံတွေးနှင့် ချွဲတွေအမှုန်တွေကနေ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေမှာ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။
-ရောဂါပိုးရှိတဲ့ နေရာကိုကိုင်တွယ်မိပြီး မျက်လုံး သို့ နှာခေါင်းတို့အား ကိုင်မိခြင်း
လူတွေ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့ အခါမှာ လေထဲကို မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ virus အမှုန်အမွှားတွေ ပက်ဖြန်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အကယ်၍သာ သင်ဟာ ၎င်းအမှုန်တွေကို အမှုန်ကျနိုင်တဲ့နေရာ (တံခါးလက်ကိုင် သို့ ဘေစင်တွေ)နဲ့ ထိတွေ့မိတာ သို့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူထိတွေ့ထားတဲ့ အရာကို ကိုင်မိတာ၊ထိမိတာတွေ ကြောင့် H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါကို ကူစက်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ မပြခင်တစ်ရက်ရက်မှာ ပြန့်နှံ့စေနိုင်သလို ဖျားနာပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာလည်း ပြန့်နှံံ့စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ ၁၀ ရက်လောက်ထိကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများ 1. ဖျားခြင်း ၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း 2. ချောင်းဆိုးခြင်း 3. လည်ချောင်းနာခြင်း 4. နှာစေးခြင်း 5. ခန္ဓာကိုယ် ကိုက်ခဲခြင်း 6.ခေါင်းကိုက်ခြင်း 7.မောပန်းခြင်း 8.တချိူ့လူတွေမှာအန်ခြင်း နှင့် ဝမ်းသွားခြင်းများရှိနိူင်ပါသည်။ ကလေးများတွင် ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးဖြစ်လာခဲ့ရင် – အိမ်မှာနားနားနေနေ နေပါ။ – ရေများများသောက်ပါ။ – ဆေးလိပ် ၊ အရက်သောက်ခြင်းရှောင်ပါ။ – ခေါက်ဆွဲပြုတ် ၊ မြူစွမ်ပြုတ် ၊ ဆန်ပြုတ် ပျော့ပြီး အားရှိသော အစားများကိုစားပါ။
-Paracetamol ကဲသို့ အဖျားကျဆေး သောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ – နီးစပ်ရာ ဆေးခန်း ( သို့ ) ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ဆေးကုသမူ့ ခံယူပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက် ကနေ တပတ်အတွင်း ပျောက်ပါတယ်။
အန္တရာယ် ရှိသောလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိသော လက္ခဏာများ 1. အသက်ရူရကျပ်ခြင်း / အသက်ရူမြန်လာခြင်း 2.ရင်ဘက်အောင့်ခြင်း 3.ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း 4.ခေါင်းအရမ်းမူးခြင်း 5.အလွန်အမင်းအန်ခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။
ကာကွယ်လို့ရနိူင်တဲ့ နည်းလမ်းများ 1. ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း အသက် ၆လ နှင့်အထက် မည်သူမဆိုထိုးလို့ရပါတယ်။ တနှစ် နဲ့ တနှစ် တုတ်ကွေးရောဂါအမျိူးအစားများ မတူတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေး တစ်နှစ် ကိုတခါ အသစ်ထွက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ကာကွယ်နိူင်စွမ်းရှိသောခုခံအားကို ရမှာပါ။ နီးစပ်ရာဆရာဝန်မှာ ထိုးလို့ရပါတယ်။ 2. လက်ကို ရေ ၊ ဆပ်ပြာ ၊ လက်ဆေး Gel များ မကြာခဏဆေးပေးရပါမယ်။ 3. ဖျားသော ၊ တုပ်ကွေးရှိသော လူများနှင့် အဝေးမှာနေပါ။
4. လက်ဖြင့် မျက်လုံး ၊ နှာခေါင်း နှင့် ပါးစပ် တို့ကို ပွတ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ 5.လူအများ စုဝေးရာနေရာများ တက်နိူင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ 6.အိမ်မှာလဲ လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ 7. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပြီး အားရှိသော အစားများစားပေးခြင်း ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ထားခြင်းကိုလဲ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်းရေးသားရင်း နိဂုံးချူပ်ပါတယ်။
Credit- Original Poster
လူတွေ ဘာကြောင့် ရေသောက်သုံးဖို့ လိုတာလဲ?